The Alexa smart speaker anokodzera $ 20 yakafanana neEcho Dot pa50 $ - BGR - TELES RELAY
HOME » Deals Alexa Intelligent Mutengo inokosha $ 20 yakafanana neEcho Dot pa50 $ - BGR
The Alexa smart speaker anokodzera $ 20 yakafanana neEcho Dot pa50 $ - BGR
Amazon Echo Dot ndiyo inotengesa Alexa achitauri munyika ino nechikonzero: hazvina mari. Kunyange zvazvo vazhinji vevakurukuri veAmazon vakashandisa 100 USD nezvimwe, Dot inongoda chete 50 USD. Saka zvakakosha kuparidzira mumba mako kuitira kuti Alexa igare iripo. Zvakanaka, inenge yakakwana. Kana iwe uchida kuwanikwa kusingabhadhari kweA Alexa, famba echo kusvika ku $ 50 uye uone iyo Eufy Genie Smart Nyaya neAma Amazon Free Hands Free panzvimbo. Iyo inogadzirwa nekambani Anker Eufy kuitira kuti uzive kuti unhu hwakanaka uye hunongodhura $ 19,99 kwazvino kuAmazon!
Heino humwe humwe ruzivo rwe peji yemiti:
eufy Genie izwi-yakagadzirirwa yakagadzirisa hurukuro neAmazon's intelligent voice mutsigiri Alexa. Ingoti chete shoko risina basa rokuti "Alexa" uye Genie anotamba mimhanzi, anoronga mano ako akachenjera, anopindura mibvunzo yako, anogadzira matanende, anoudza nezvemamiriro ekunze uye nhau, nezvimwewo. (2,4 GHz Wi-Fi network pakutsigira chete, hapana Bluetooth). Spatial Perception Technology inosarudza kuchenjera Eufy Genie kana Echo yepedyo kwauri kuti usangane nechikumbiro chako.
Yakavakwa mukurukuri 2 W kupa simba inzwi uye kurira achizadza mumba, saka iwe here kunakidzwa chaunofarira Playlists kubva kudirana mabasa akadai Spotify, Amazon Music, TuneIn, Pandora uye iHeartRadio. Dana kana email pane chero ani zvake ane Eufy Genie yako uye pakarepo ubatane kune dzimwe Alexa maikirisi mumba mako uchishandisa inzwi rako chete.
Inobvumira chechokwadi chekutungamirirwa neimba yakanaka yeimba. Shandisa Genie kudzora chero enderana akangwara zvigadzirwa Eufy Alexa akadai akangwara Mabumba RoboVac 11c uye Lumos akatungamirira nevamwe pezvitsiga kushanda pamwe Alexa.
Kuiswa nyore nyore neEefyHome yega yega yega. Shandisa Amazon Alexa app kuti uwane humwe hutano hwe10000 nemabasa, akadai saSirius XM, Domino's Pizza, Uber, ESPN, NPR News nezvimwe. Uyezve, Genie anowedzera kuchenjera. Zuva remangwana rinosanganisira: mharidzo uye Alexa call. (EufyHome inoda smartphone kana tablet rinoshanda iOS 8.0 (kana yakakwirira) kana Android 4.3 (uye yakakwirira) kushanda.)
Chii wasvikako: eufy Genie, AC adapteri (1,5 m), aux waya (Ft 5 / 1,5 m), manual, kuchengeteka mirayiridzo kadhi zvinosimbisa yedu kusingachinji 12 mwedzi uye tinotsigira upenyu .
tevera @Bkuueals pa Twitter kuti uchengetedze-ne-zuva nezvinoitika uye zvakanakisa zvinoshandiswa zvatinokwanisa kuwana pasi pewebhu.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pezvipo zvatinowana uye zvakatsigirwa nemikana yemukana, tapota tumira email kune sponsorisé@bgr.com
Zvinyorwa zveBGR Deals zvakasununguka kubva kuHedheni uye Kuzivisa, uye BGR inogona kugamuchira mutengo wekutenga kunoitwa kuburikidza nemashoko edu.
Mufananidzo Unobva: Anker
Inzwa kushungurudzika kunopera neyi shiatsu massage mutezo inoputirwa ku 30 $ - BGR
Iwe uchabika steak kusvika pakukwana nguva dzose neyi 69 $ - BGR
Jenifer Bartoli akarovera pachikwata naTexerry Neuvic uye mwanakomana wake Joseph panguva yekambani yake